🥇 ukubalwa kwezimali nokubikwa kwesikhungo esikweletwa
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 196
Ividiyo yokubalwa kwemali nokubikwa kwesikhungo esikweletwa
Oda ukubalwa kwezimali nokubikwa kwesikhungo esikweletwa
Ukubalwa kwezimali nokubikwa kwesikhungo sesikweletu ku-USU Software kuhlelwe kumodi yesikhathi samanje, ngakho-ke noma yikuphi ukusebenza okwenziwa yisikhungo sekhredithi kuboniswa ngokushesha ku-accounting yaso futhi ngesikhathi esifanayo kubhalwe phansi ukubika, ngenkathi abasebenzi bengabambiqhaza noma iyiphi yalezi zinqubo, kepha kuphela ekwenzeni umsebenzi uqobo nokubhaliswa kwawo ngamafomu kagesi. Ngemuva kwalokho, zonke izenzo, kufaka phakathi ukubalwa kwezimali nokubikwa, zenziwa nge-automation: ukuqoqa imininingwane yomsebenzisi eqinisekisa ukuthengiselana okwenziwe, ukuyihlela ngezinqubo, izinto, izihloko, nezinkomba zokubala ezingaphansi kokubalwa kwezimali futhi ezifakiwe ekubikeni okwenziwe ngokuzenzakalela, futhi umphumela otholakele uboniswa ngokushesha kudokhumenti ehambisanayo ehambisana nenqubo yokubalwa kwemali.
Ukuzenzakalela kokubalwa kwezimali kanye nokubika kwesikhungo esikweletisa kuthuthukisa izinqubo zangaphakathi isikhungo sesikweletu esinazo emisebenzini yaso, kulawula imisebenzi nomsebenzi wabasebenzi, kusungula ukulawula ukubalwa kwezimali nokubika, kusheshisa ukushintshaniswa kolwazi, futhi ngalokho, kwandisa ukusebenza kahle futhi ukunemba kokubalwa kwezimali, ikhwalithi yokubika kanye nezinqubo zenkampani yejubane, kunciphisa izindleko zesikhungo sokuthenga ngesikweletu ngokunciphisa izindleko zabasebenzi kanye nokwandisa umkhiqizo wezabasebenzi, okuzoholela ekuthuthukisweni kwenzuzo. Kusetshenziswa ukuzenzakalela kokubalwa kwezimali nokubika, isikhungo sezikweletu sakha zonke izinqubo zokugcina amarekhodi emisebenzi yaso futhi sihlela imininingwane ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokubika, kufaka phakathi ukubalwa kwezimali kwamakhemikhali nokubika kwezibalo komlawuli, ngenkathi i-automation isakhiqiza yonke imibhalo yanoma yiluphi uhlobo yokubika.
Ngakho-ke, ukubamba iqhaza kwabasebenzi besikhungo sesikweletu kuncishisiwe ekusebenzeni okuzenzakalelayo kwemisebenzi yaso, kufaka phakathi ukubalwa kwezimali nokubika, ngoba uhlelo lwe-automation lwenza imisebenzi eminingi, ngakho-ke, lusebenza esikhundleni sabasebenzi, umthwalo wabo manje ofaka ukufaka ukufundwa kwabo ku amafomu kagesi ashiwo ngenhla, angabobonke abasebenzi futhi anikeza umthwalo wemfanelo womuntu siqu ngekhwalithi yemininingwane efakwe kubo kanye nemali ezuzwayo yomholo wanyanga zonke, kucatshangelwa imininingwane efakwe kuzo.
Ukuzenzakalela kwesikhungo sokuthenga ngesikweletu kulawula imisebenzi yabasebenzi, kucatshangelwa isikhathi nobubanzi bomsebenzi ohambisana nomsebenzi ngamunye owenziwayo, ukwenza umsebenzi wabo kube ngokwezifiso, ukunikela izingodo ezingazodwana nendawo yokusebenza yomuntu ngamunye - indawo yokubophezeleka ngaphakathi kwamakhono nemisebenzi eyabelwe. Ngasikhathi sinye, ukuzenzakalela kokubalwa kwezimali nokubika kwesikhungo sokuthenga ngesikweletu kunikeza amafomu e-elekthronikhi ahlanganisiwe njengamagazini womuntu ngamunye ukusheshisa izinqubo zokufakwa kwedatha ezenziwa ngabasebenzisi nsuku zonke, ngaleyo ndlela kwandise isivinini sezinqubo, njengoba kushiwo ngenhla. Ukuhlanganiswa kwamafomu ahlinzekwa yi-automation kuholela ekuhlanganisweni kwemisebenzi, kuletha ukwenziwa kwabo ku-automatism, okudingeka ukwengeza imisebenzi. Ngasikhathi sinye, i-automation yesikhungo sekhredithi ibhalisa inani lomsebenzi owenziwe ngabasebenzisi ngesikhathi, ngokuya ngokusebenza okujwayelekile, futhi ihlola ukusebenza kwalowo nalowo ngemuva kwesikhathi kulungiselelwa ukubika kwangaphakathi ngokuhlaziywa kwazo zonke izinhlobo Umsebenzi kanye nabasebenzi ababambe iqhaza kuzo.
Ukuzenzakalela kwesikhungo sezezikweletu kusivumela ukuthi sihlaziye njalo imisebenzi yaso, kufaka phakathi ukuhlolwa kwesimo sezicelo zemalimboleko ezenza inzuzo yaso, ngakho-ke ukuhlaziywa kwabo kwenza kube nokwenzeka ukulawula ukusebenza kwamakhasimende, ukuhambisana kwawo nemibandela yezikweletu, isikhathi esifanele sokukhokha, kanye nenani lesikweletu esivele sikhona. Kufanele kungezwe ukuthi yi-USU Software kuphela enikeza ukuhlaziywa okuzenzakalelayo kulesi sigaba sentengo, ngenkathi okunikezwayo okufanayo okuvela kwabanye abathuthukisi kunganikela kuphela ngezindleko eziphakeme zohlelo. Isikhungo sezikweletu asitholi kuphela imibiko ngokuhlaziywa kwazo zonke izinhlobo zomsebenzi kepha futhi nezibalo zezinkomba ezinamandla ezinguquko ezikhathini ezedlule, ezivumela ukuhlelwa okusebenzayo kwezikhathi ezizayo, kucatshangelwa idatha enqwabelene nokubikezela imiphumela, ukuyichaza ngokuya nge- ukuthambekela okukhonjiwe.
Lolu hlelo lufakwe kumakhompyutha esikhungo sesikweletu ngabachwepheshe bethu, ngaphandle kokubandakanya abasebenzi bayo ekufakweni, kepha linikeza isethulo esifushane samandla onke esoftware, esivumela nabasebenzi ukuthi bazijwayeze ngokushesha ukusebenza kwentuthuko ephumelelayo. Yize imikhiqizo yethu yehluka kunabo bonke abanye ngokuzulazula kwabo okulula nangesixhumi esibonakalayo esilula, lokhu kukuvumela ukuthi ubandakanye abasebenzi emsebenzini ngaphandle kwamakhono okusebenzisa, uhlinzeka ngohlelo oluzenzakalelayo ngolwazi oluhlukahlukene. Imininingwane enjalo ehlukile isiza ukuqamba incazelo eningiliziwe futhi ejulile yesimo samanje sezinqubo nokusebenza okwenziwa ngesikhathi esithile esikhungweni sezezimali.
Ukwenza umsebenzisi asebenze ngokwezifiso, ukukhetha kokuklama kwesikhombimsebenzisi okungaphezulu kwama-50 kunikezwa ngesondo lokuhambisa elilula eskrinini esikhulu. Abasebenzisi bathola ukufinyelela okuhlukile kwimininingwane yesevisi, enqunyelwe ubukhulu bemisebenzi namandla abo, ngokunikeza ukungena komuntu siqu namaphasiwedi. Ukwenza ngezifiso ukungena ngemvume kuhlinzeka ngokwenza amafomu kagesi womuntu siqu, okulula ukuwalawula ngekhwalithi, isikhathi sokubulawa, nokwethenjelwa kwedatha. Ukulawula kungumsebenzi wabaphathi, onokufinyelela kwamahhala kuwo wonke amadokhumenti, usebenzisa umsebenzi wokucwaningwa kwamabhuku ukusheshisa inqubo yokuhlola izingodo.
Kusuka kumininingo egciniwe eyakhiwe ohlelweni oluzenzakalelayo, isisekelo samakhasimende, igama lesibizo, isisekelo semalimboleko, isisekelo somsebenzisi, nokunye kwethulwe ukubalwa kwemali nokubikwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zemisebenzi. Into esemqoka ekubalweni kwemali mboleko yisisekelo semalimboleko, engaqukethe uhlu oluphelele lwazo kuphela kodwa futhi nemininingwane eningiliziwe kuhlelo ngalunye olunemigomo, amanani, nemibandela. Ngemalimboleko ngayinye, ungakhombisa irejista enemininingwane yokusebenza okwenziwe esikhungweni sesikweletu selokhu yakhishwa, kufaka phakathi izinsuku, igama lemisebenzi eyenziwe, kanye nemiphumela etholakele. Umsebenzi ngamunye owenziwa ku-database yemalimboleko unikezwa isimo esihlukile nombala kuwo ukuze ulawule okubukwayo esimweni samanje semalimboleko ukuze usihlole ngokushesha.
Uhlelo oluzenzakalelayo lwezikhungo ezikweleta lisebenzisa kabanzi ukubona izinkomba kombala, okusindisa isikhathi sabasebenzisi ekuhloleni izinqubo zamanje nasekuzuzeni imiphumela. Isisekelo semalimboleko singahlelwa kalula ngesimo ukugqamisa indawo yangempela yomsebenzi, esiza ukuhlukanisa imisebenzi yenkampani futhi, ngakho-ke, isheshise ukuqaliswa kwayo. Okungabalulekanga kangako kunesisekelo semalimboleko yisisekelo samakhasimende, lapho kungagxili kuphela imininingwane yomuntu siqu kanye noxhumana nabo bababoleki kepha umlando ophelele wokuxhumana ngamunye uqoqwa. Lapha, kwakhiwa irejista efanayo yokuxhumana neklayenti ngalinye, lapho zonke izenzo ezenziwayo zikhonjiswa ngezinsuku, kufaka phakathi izingcingo, izincwadi, kanye nemiphumela yokuxhumana.
Amaklayenti ahlukaniswe ngezigaba ngokwezigaba ezikhethwe yisikhungo sezezikweletu, lokhu kukuvumela ukuthi uhlele ukuxhumana namaqembu akhonjiwe, okwandisa kakhulu isilinganiso sokusebenzisana. Uhlelo luzimela ngokuzimela zonke izibalo ezihlobene nokubalwa kwezimali nokubika, kufaka phakathi izinkokhelo ezicubungula uhlelo lokukhokha, inzalo, amakhomishini, futhi lenza ukubalwa kabusha kwenkokhelo lapho izinga lokushintshashintsha lishintsha. Ibala umholo wezinhlamvu kubasebenzisi ngokuya ngevolumu yemisebenzi ebhaliswe ezingodo zabo zomsebenzi, ikhulisa umsebenzi wabasebenzi.